Wholesale HCV Rapid Test Cassette / Strip / kit (WB / S / P) vagadziri uye vanotengesa | HEO
CHIMWE CHITATU HCV TEST (Yese Bl ...
HCV Inokurumidza Kwayedza Kaseti / Str ...
COVID-19 IgG / IgM Yekukurumidza Bvunzo ...
COVID-19 Antigen Rapid Bvunzo ...
OEM / ODM Mugadziri Corona ...
HCV Rapid Test Cassette / Strip ndeye lateral kuyerera chromatographic immunoassay yehunhu hwekuona hutachiona hweHepatitis C Virus muRopa Rese / Serum / Plasma. Inopa rubatsiro mukuongororwa kwehutachiona neHepatitis C Virus.
Hepatitis C hutachiona (HCV) hutachiona hweRNA hwakakandirwa mumhuri yeFlaviviridae uye hunokonzeresa Hepatitis C. Hepatitis C chirwere chisingaperi chinobata vanhu vanosvika miriyoni zana nemakumi masere negumi pasirese. Sekureva kweWHO, pagore, vanhu vanopfuura mazana matatu nemakumi matatu vanofa nechirwere chechiropa chine chekuita nechiropa uye vanhu vane mamirioni matatu vane hutachiona hweHCV. Inenge 3% yevagari vepasi rose vanofungidzirwa kutapukirwa neHCV. Zvinopfuura makumi masere muzana zvevanhu vane hutachiona hweHCV vanoita chirwere chisingaperi chechiropa, 20-30% inoita cirrhosis mushure memakore makumi maviri kusvika makumi matatu, uye 1-4% vanofa nechirwere checirrhosis kana gomarara rechiropa. Vanhu vane hutachiwana hweHCV vanogadzira antibodies kuhutachiona uye kuvapo kwemasimba aya muropa kunoratidza hutachiona huripo kana hwekare neHCV.
[KUumbwa] (25sets / 40sets / 50sets / customized magadzirirwo zvese zvinogamuchirwa)
Iyo yekaseti yekaseti / tambo ine membrane tambo yakavharwa pamwe nekubatanidzwa HCV antigen pamutsetse wekuyedza, tsuro antibody pane yekudzora tambo, uye dhayi pad iyo ine colloidal goridhe rakabatana ne recombine HCV antigen. Huwandu hwemiyedzo hwakadhindwa pakanyorwa.
Kwayedza kaseti / bvisa
Zvishandiso Zvinodiwa Asi Kwete Zvakapihwa
Chimiro chekuunganidza mudziyo
Maitiro akajairwa anokundikana kutsaura hutachiona musikirwo tsika kana kuifungidzira nemagetsi maikorosikopu. Kubatanidza hutachiona genome kwakaita kuti zvikwanise kugadzira serologic assays iyo inoshandisa inogadzirisazve maantigen. Zvichienzaniswa nechizvarwa chekutanga HCV EIAs vachishandisa imwechete recombinant antigen, akawanda maantigen anoshandisa recombinant protein uye / kana synthetic peptides akawedzerwa mune itsva serologic bvunzo kudzivirira nonspecific kuyambuka-reactivity uye kuwedzera kunzwisiswa kweiyo HCV antibody bvunzo. HCV Rapid Test Cassette / Strip inoona masoja ekudzivirira hutachiona hweHCV muRopa Rese / Serum / Plasma. Chiyero chinoshandisa mubatanidzwa weprotein A yakavharwa nezvimedu uye zvinodzokedzana zveHCV mapuroteni kuti asarudze achiona maantibodies kuHCV. Iyo inogadzirisazve HCV mapuroteni anoshandiswa muyedzo akaiswa encoded nemageneti ezvese zvakaumbwa (nucleocapsid) uye asiri ezvakaumbwa mapuroteni.
Iyo HCV Inokurumidza Kwayedza Kaseti / Strip ndeye immunoassay yakavakirwa pamisimboti yeakaviri antigen-sangweji maitiro. Munguva yekuyedzwa, Ropa Rese / Serum / Plasma specimen inokwira kumusoro necapillary chiito. Masoja ekudzivirira hutachiona kuHCV kana aripo mumuenzaniso achasunga kune HCV conjugates. Iyo immune tata inozotorwa pane iyo membrane neyakagara-yakaputirwa recombinant HCV maantigen, uye tambo inooneka yevaravara inozoonekwa munzvimbo yekuyedza mutsara unoratidza mhedzisiro yakanaka. Kana masoja ekudzivirira HCV asipo kana aripo pazasi peyero inoonekwa, mutsetse weruvara hauzoumbwe munzvimbo yekuyedza inoratidza mhedzisiro yakaipa.
Kuti ushande senzira yekudzora, tambo ine mavara inogara ichionekwa padunhu redzimana, zvichiratidza kuti rakakodzera vhoriyamu yechiratidzo yawedzerwa uye kumonerwa kwekumhanya kunoitika.
(Mufananidzo uyu ndewekureva chete, ndapota tarisa kuchinhu chakakosha.) [ZveKaseti]
Bvisa kaseti yekuyedza kubva muhomwe yakavharwa.
Nezve serum kana plasma specimen: Bata iyo yekudonha yakatwasuka uye tamisa madonhwe matatu eserum kana plasma (ingangoita 100μl) kune iyo tsananguro tsime (S) yeiyo test kifaa, wobva watanga iyo timer. Ona mufananidzo pazasi.
Kune ese eropa mienzaniso: Bata iyo yekudonha yakatwasuka uye tamisa donhwe rimwe reropa rese (ingangoita 35μl) kune iyo specimen tsime (S) yemuchina wekuyedza, wobva wawedzera madonhwe maviri ebhafa (angangoita 70μl) uye wotanga iyo timer. Ona mufananidzo pazasi.
Mirira mavara (s) ane mavara kuti aoneke. Dudzira zvabuda mumaminetsi gumi nemashanu. Usaverenge zvawanikwa mushure memaminitsi makumi maviri.
Zve in vitro yekuongorora yekushandisa chete.
Kune vashandi vezvehutano uye nyanzvi panzvimbo dzekuchengetedza nzvimbo.
Usashandise mushure mekupera kwezuva.
Ndokumbirawo kuti muverenge ruzivo rwese rwuri mugwaro rino musati maita bvunzo.
Iyo kaseti / yekaseti yekuyera inofanira kuramba iri muhomwe yakavharwa kusvika yashandiswa.
Zvese zvienzaniso zvinofanirwa kutarisirwa kunge zvine njodzi uye zvinobatwa nenzira imwecheteyo seanotapukira.
Iyo yakashandiswa test cassette / strip inofanira kuraswa zvinoenderana nemitemo yenyika, yenyika uye yemunharaunda.
Maitiro ekudzora anosanganisirwa muyedzo. Mutsara wakavezwa unoonekwa mudunhu rekutonga (C) inoonekwa senge yemukati maitiro maitiro. Iyo inosimbisa yakaringana mienzaniso vhoriyamu, yakakwana membrane wicking uye chaiyo maitiro maitiro.
Kudzora zviyero hazvipi neichi kit. Nekudaro, zvinokurudzirwa kuti zvakanaka uye zvisina kunaka zvidzoreredzo zviongororwe seyakanaka murabhoritari maitiro kusimbisa maitiro ebvunzo uye kuongorora kuita kwakakodzera kwebvunzo.
HCV Rapid Test Cassette / Strip inogumira kupa humbowo hwehunhu. Iko kusimba kwetambo yekuyedza hazvireve kuti kunoenderana nekukosheswa kwechirwere muropa.
Mhedzisiro yakawanikwa kubva pamuedzo uyu inoitirwa kuve rubatsiro mukuongorora chete. Chiremba wega wega anofanira kududzira zvawanikwa pamwe chete nenhoroondo yemurwere, zviwanikwa zvemuviri, uye mamwe maitiro ekuongorora.
Mhedzisiro isina kunaka inoratidza kuti masoja ekudzivirira HCV anogona kunge asipo kana pamatanho asingaonekwe nemuyedzo.
Chibvumirano neCommerce HCV Rapid Bvunzo
Rutivi-ne-parutivi kuenzanisa kwaiitwa uchishandisa iyo HCV Rapid Bvunzo uye yekutengesa inowanikwa HCV bvunzo dzekukurumidza. 1035 makiriniki emakiriniki kubva kuzvipatara zvitatu akaongororwa neHCV Rapid Test uye kit kitiki. Iwo mienzaniso \_ akaongororwa neRIBA kusimbisa kuvepo kweHCV antibody mumienzaniso. Mhedzisiro inotevera yakanyorwa kubva kuaya makiriniki ekudzidza:
Yekutengesa HCV Yekukurumidza Bvunzo Yese
HEO TECHI® Zvakanaka 314 0 314
Yese 314 721 1035
Chibvumirano pakati pemidziyo miviri iyi 100% yezvakanaka zvienzaniso, uye 100% yezviratidziro zvisina kunaka. Ichi chidzidzo chakaratidza kuti iyo HCV Rapid Bvunzo yakaenzana zvakaenzana neyekutengesa chishandiso.
Mazana mazana matatu emakiriniki akaongororwa pamwe neiyo HCV Rapid Bvunzo uye iyo HCV RIBA kit. Mhedzisiro inotevera yakanyorwa kubva kuaya makiriniki ekudzidza:
Yese 100 200 300
Pashure: COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Cassette (Colloidal goridhe)
Zvadaro: KUMWE STEP HCV TEST (Yese Ropa / Serum / Plasma)
anti hcv antibody bvunzo
anti hcv kuongororwa kweropa
anti hcv bvunzo
hcv antibody yakanaka
hcv kuongorora ropa
hcv genotype bvunzo
hcv isina kunaka
hcv isiri inoshanda
HCV Inokurumidza Bvunzo Yekushandisa
hcv rna bvunzo
hcv bvunzo mhedzisiro
Dengue IgGIgM + Ns1 combo Bvunzo Chishandiso (Yese Bloo ...
Dengue IgGIgM Kwayedza Chipenga (Ropa ReseSerumPlasma)
Dengue Ns1 Kwayedza Chishandiso (Yese RopaSerumPlasma)